स्थानीय तहको लागि ८० हजार कर्मचारी आवश्यक » खबरहरुको एउटै केन्द्र
स्थानीय तहको लागि ८० हजार कर्मचारी आवश्यक
मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ ०६:२६ मा प्रकाशित !
१५ चैत,काठमाडौँ। स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना स्थानीय सेवा आयोगले गर्ने भएको छ । अहिले स्थानीय तहमा निजामती र साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी रहँदा वरिष्ठ र कनिष्ठको द्वन्द्व छ । स्थानीय सेवा आयोग गठन भएपछि ७४४ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका सबै प्रक्रिया स्थानीय सेवा आयोगले गर्नेछ । सङ्घ र प्रदेशमा भने लोकसेवा अयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार साबिक स्थानीय निकायमा स्थानीय निकाय आफैले पदपूर्ति समिति निर्माण गरी कर्मचारी भर्ना गर्दै आएका थिए । सेवा आयोग गठन भएपछि भने स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दा लोकसेवा आयोगको जस्तै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ७४४ स्थानीय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका नगरपालिका र गाउँपालिका) मा संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा करिब एक लाख कर्मचारी चाहिने स्थानीय निकाय कर्मचारी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । अहिले साबिक स्थानीय निकायमा १७ हजार सात सय मात्रै कर्मचारी छन । स्थानीय निकाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न अझै ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ ।
उनका अनुसार उक्त ऐन अहिले मन्त्रिपरिषद्मा छ, त्यहाँबाट संसद्मा पठाइन्छ । उनले भने , ‘ऐन जारी भएपछि कार्यान्वयमा आउन समय लाग्ला तर ऐनमा नै स्थानीय सेवा आयोग गठन हुने भएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापकको समस्याको अन्त्य हुनेछ । ’
स्थानीय सेवा आयोगको अतिरिक्त स्थानीय शासन ऐनको मस्यौदा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा र काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकिएका छन । त्यस्तै गाउँ, नगर र जिल्ला सभाको बैठकको कार्याविधि, राजस्व सङ्कलन विधिलगायत विषय पनि ऐनमा समेटिएका छन ।
PREVIOUS POST Previous post: आज उच्च सुरक्षाकासाथ आरआर क्याम्पसमा स्ववियुको चुनाव हुदै
NEXT POST Next post: २६ सिट भन्दा बढी क्षमताका गाडी सञ्चालनमा रोक
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ ०६:२६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ ०६:२६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ ०६:२६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ ०६:२६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ ०६:२६